04/04/2018 - Page 3 sur 4 -
Tambazotra mpisoloky : Ravan’ny polisy
Noravain’ireo polisy avy any Ambalavao ny tambazotra mpisoloky milaza fa manana “mena-bato” any an-toerana. Tamin’iny herinandro lasa iny no nanaovan’izy ireo ny fisamborana, ka olona miisa efatra no voapaingotra tamin’izany. Mitovy tamin’ny paikadin’ireo olon-dratsy efa …Tohiny
Fanohanana ny fanabeazana : Nanolotra 100 tapitrisa Dolara ny banky iraisam-pirenena
Nankatoavin’ny banky iraisam-pirenena sy ny mpiara-miombon’antoka iraisam-pirenena ho an’ny fanabeazana (GPE) ny faramparan’ny herinandro teo ny famatsiam-bola 100 tapitrisa Dolara entina hanatsarana ny voka-pianarana amin’ny ambaratonga roa voalohany amin’ny fanabeazana fototra eto Madagasikara. Famatsiam-bola izay …Tohiny
Nitondra ny heviny mahakasika ny fahalanian’ireo volavolan-dalàna telo fehizoro momba ny fifidianana ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier, omaly. Tamin’izany indrindra no nanambarany fa nandresy ny demokrasia tamin’ny fandanian’ireo solombavambahoaka ny lalàm-pifidianana. Eny, fa na nisy …Tohiny
Nankatoavina teny amin’ny antenimieram-pirenena avokoa ireo volavolan-dalàna miisa 3 hifehy ny ny fifidianana ankapobeny sy ny fitsapankevi-bahoaka, mifehy ny fifidianana Filoham-pirenena, mifehy ny fifidianana Solombavambahoaka. Miisa 79 ireo solombavambahoaka no nandany izany omaly. Amin’ ny …Tohiny